Mavhidhiyo akashongedzwa neeva rabara maruva | Mhizha On
Mavhidhiyo akashongedzwa neeva rabara maruva
DonluMusical | | Mhizha neEVA rubber, Mhizha yevana
Clip uye zvinyorwa Ndinoda. Pese pandinoenda kuchitoro chepamusoro ndotenga zvimwe zvezvinhu izvi. Saka kana iwe uchida desktop zvinhu, mune ino posvo ini ndiri kuzokuratidza maitiro ekugadzira ako akashongedzwa clip mune chaiyo chaiyo nzira.
1 Zvishandiso zvekugadzira iwo akashongedzwa clip
2 Kugadziriswa kwemavhidhiyo akashongedzwa
Zvishandiso zvekugadzira iwo akashongedzwa clip
Makara eva rabha
Eva rabha zvibhakera
Hot glue kana silicone
Kugadziriswa kwemavhidhiyo akashongedzwa
Nerubatsiro rwevanopora, gadzira aya maumbirwo mumavara aunonyanya kufarira, asi ayo anobatana neumwe neumwe.
Enda unonamatira imwe pamusoro peimwe kuti ugadzire iyo inozonamirwa kune yedu clip: denderedzwa, ruva, diki diki uye bhatani.
Kana izvi zvangoitwa, tendeuka uye unamate clip kubva kumashure nesilicone inopisa kana chero mhando yeglue.
Isa imwe denderedzwa yakaenzana pamusoro kuvhara uye kusimbisa kubatana uku.
Uye isu tapedza, isu tine mamwe emhando yepamusoro uye akashongedzwa mavhidhiyo ekupa mabhuku edu kubata kukuru. Ini ndagadzira aya maviri mamodheru achibatanidza inodziya mavara mune imwe uye inotonhora mavara mune imwe. Iyi imwe nzira isingambokundikana uye yandinogara ndichikurudzira.
Sezvauri kuona, akakosha akaiswa mumabhuku edu kutara iko kwatinoenda kana kuhodha noti kana magwaro atakasunungura.
Parizvino hunyanzvi hwanhasi, ndinotarisira kuti wakazvifarira uye kana ukazviita, usakanganwa kunditumira pikicha kuburikidza nechero yemasocial network.
Tokuona pane inotevera zano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Mhizha yevana » Mavhidhiyo akashongedzwa neeva rabara maruva
Tafura ine mavara machira - Dhijitari dhizaini
Maitiro ekugadzira muchero garandi